Ciidamada Nabad Sugida oo ka hortagay qaraxyo laga fulin rabay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamda Ammaanka ayaa ka hor tagay Koox mooto Bajaaj ka soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa, taas oo ay ciidanku ku qabteen bar koontarool oo ku leeyahiin Wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Cabdi Kaamil Macalin Xirsi ayaa Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed Ee SONNA u sheegay in Wadihii Mooto Bajaajka uu ku geeriyooday qarax ka dhashay waxyaabihii Mootada saarnaa, iyadoo ciidamada iyo dadka Rayidka ahna aysan wax dhibaato ah kasoo Gaarin falkaasi.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in Ciidamada ay heleen Xogta Mootada kahor inta aysan soo gaarin fariisinka Ciidamada, kadibna wadaha Mootada uu isku dayay in uu iska caabin kala horyimaado Askarta.
“Ciidamada Amaanka oo ku suggnaa Bar kantarool oo ay ka sugayeen Amaanka Wada Warshadaha iyo Xaafada Xero Jarmal, ayaa ka war helay Mooto bajaaj laga Soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa, durbana waxa ay isku dayeen in ay qabtaan, Wadihii ayaa bilaabay in uu Ciidanka iska Caabin ku sammeeyo, balse uma aysan suuragalin oo Mootadii ayaa isaga kaligii la qaraxday”.Sidaasi waxaa Yiri Mudane Xirsi.
Dhinaca kale Ciidamada Booliska, Nabadsugidda iyo AMISOM oo wada socda ayaa howlgal xalay ka sammeeyay Xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Heliwaa, halkaas oo lagu soo qabqabtay illaa Shan Dhanllinyaro ah oo lala xiriiriyay in ay ka tirsanyihiin Maleeshiyaadka Al-shabaab.
Howlgalkaasi waxaa intii uu socday Xaafadda Suuqa Xoolaha kormeer ku tagay Taliyaha K.M.G ee Hay’adda NISA Janaraal C.laahi Gaafoow Maxamuud iyo Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha Mudane C.rasaaq Cumar, iyagoo Lacag dhiirri galin u qeybiyay Ciidamada Ammaanka ee howlgalka ka qeybqaadanayay.
WFP oo laga digay raashiinka ay soo galiso Soomaaliya